Fahatakarana ny fanjakana - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Fantaro ny fanjakana
Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy mba hivavaka mba hahatongavan’ny fanjakany. Fa inona marina io fanjakana io ary ahoana marina no hahatongavany? Amin’ny fahalalana ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’ny lanitra (Matio 13,11) Nilazalaza ny fanjakan’ny lanitra tamin’ny mpianany i Jesosy tamin’ny fanehoana an’izany tamin’izy ireo. Hoy izy: “Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny ...” ary avy eo dia nanao fampitahana, toy ny voan-tsinapy, izay kely amin’ny voalohany, dia ny lehilahy izay mahita harena any an-tsaha, ny mpamboly izay manamafy, na olo-manan-kaja izay nivarotra ny habakoka sy ny fananany rehetra mba hahazoana perla tena miavaka. Tamin’ny fanaovana ireo fampitahana ireo, dia niezaka nampianatra ny mpianany i Jesosy fa “avy amin’izao tontolo izao” ny fanjakan’Andriamanitra ( Jaona 18:36 ). Na dia izany aza, dia mbola tsy azon’ny mpianatra ny fanazavany, ka nihevitra fa i Jesosy no hitarika ny vahoakany ampahorina ho any amin’ny fanjakan’izao tontolo izao izay hananany fahafahana ara-politika sy fahefana ary voninahitra. Kristiana maro ankehitriny no mahatakatra fa ny fanjakan’ny lanitra dia misy ifandraisany bebe kokoa amin’ny ho avy ary tsy dia misy fiantraikany amintsika amin’izao fotoana izao.
Toy ny vatokely misy dingana telo
Na dia tsy misy fanoharana tokana aza dia afaka maneho ny haben'ny faritry ny Fanjakan'ny Lanitra, ity manaraka ity dia mety hanampy amin'ny konteksta misy antsika: Ny Fanjakan'ny Lanitra dia toy ny balafomanga misy dingana telo. Ny ambaratonga roa voalohany dia mifandraika amin'ny zava-misy ankehitriny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary ny fahatelo kosa mifandraika amin'ny fanjakan'ny lanitra tonga lafatra izay ho avy.
Haavony 1: ny fiandohana
Ny fanjakan'ny lanitra eto amin'izao tontolo izao dia manomboka amin'ny dingana voalohany. Izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny Fahatongavan'i Jesosy Kristy. Amin'ny maha-Andriamanitra sy ny olona rehetra antsika dia entin'i Jesosy amintsika ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny maha Mpanjakan'ny Mpanjaka azy, na aiza na aiza misy an'i Jesosy, dia eo koa ny Fanjakan'Andriamanitra.
Ambaratonga 2: ny zava-misy ankehitriny
Ny dingana faharoa dia nanomboka tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika tamin'ny alàlan'ny fahafatesany, ny fitsanganany, ny fiakarana, ary ny nandefasana ny Fanahy Masina. Na dia tsy misy ara-batana intsony izy, dia ato amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ary avy eo mampiray antsika ho vatana iray. Efa misy ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra. Hita amin'ny zavaboary rehetra izany. Na aiza na aiza firenena izay fonenantsika et earthly an-tany, isika dia efa olom-pirenen'ny lanitra, satria efa eo ambany fahefan'Andriamanitra isika ary noho izany dia miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ireo izay manaraka an’i Jesosy dia lasa anisan’ny fanjakan’Andriamanitra. Rehefa nampianatra ny mpianany hivavaka i Jesosy hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra.” (Mat 6,10) nampihariny taminy ny mitsangana hivavaka ho an’ny ankehitriny sy ny ho avy. Amin’ny maha-mpanara-dia an’i Jesosy antsika, dia antsoina isika hijoro ho vavolombelona ny amin’ny maha-olom-pirenena antsika any an-danitra ao amin’ny fanjakany, izay efa eto. Tsy tokony hihevitra ny fanjakan’ny lanitra ho toy ny zavatra miantraika amin’ny hoavy fotsiny isika, satria amin’ny maha-olom-pirenena amin’ity fanjakana ity dia efa antsoina isika hanasa ny mpiara-belona amintsika mba ho anisan’ity fanjakana ity ihany koa. Ny miasa ho an’ny fanjakan’Andriamanitra koa dia midika hoe mikarakara ny mahantra sy sahirana ary mikarakara ny fiarovana ny zavaboary. Amin’ny fanaovana izany, dia mitory ny vaovao tsaran’ny hazo fijaliana isika satria maneho ny fanjakan’Andriamanitra ary ny mpiara-belona amintsika dia afaka mahafantatra izany amin’ny alalantsika.
Ambaratonga 3: fahafenoana ho avy
Ny dingana fahatelo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia amin'ny ho avy. Hahatratra ny halehiben'izy ireo io rehefa hiverina i Jesosy ary hanangana tany vaovao sy lanitra vaovao.
Amin’izay fotoana izay no hahalalan’ny olona rehetra an’Andriamanitra ary ho fantatra amin’ny maha-izy azy tokoa izy - “rehetra amin’ny rehetra” (1. Korintiana 15,28). Manana fanantenana lalina isika izao fa hiverina amin’ny laoniny ny zava-drehetra amin’izao fotoana izao. Famporisihana ny maka sary an-tsaina an’io toe-javatra io sy ny hisaintsainana hoe hanao ahoana izany, na dia tokony hotadidintsika aza ny tenin’i Paoly izay tsy mbola takatsika tanteraka (1. Korintiana 2,9). Saingy raha manonofy ny amin’ny dingana fahatelo amin’ny fanjakan’ny lanitra isika, dia tsy tokony hanadino ireo dingana roa voalohany. Na dia any amin’ny ho avy aza no tanjontsika, dia efa misy ny fanjakana ary noho izany, dia antsoina isika mba hiaina mifanaraka amin’izany sy hampita ny vaovao tsaran’i Jesosy Kristy ary handray anjara amin’ny fanjakan’Andriamanitra (ankehitriny sy ho avy) amin’ny hafa. fahazoan-dalana.